MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA SHEPWEILER IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Shepweiler iyo Sawirada
Adhijistaha Jarmalka / Rottweiler eeyaha isku dhafan ee isku dhafan
'Tani waa Shepweiler Marshall. Waa eey badbaadinaya 2 1/2 sano jir oo ka yimid West Virginia oo aan dhowaan ka qaadanay Disembartii la soo dhaafay hoyga Niagara Falls.
Shepweiler-ka ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Adhijirka Jarmalka iyo Rottweiler . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Jeff Shepweiler (Rottweiler / Shepherd mix) sida eey yar oo 6 bilood jir ah oo taagan kursiga keydka - Jeff waa nin firfircoon. Wuxuu jecel yahay inuu ka fikiro inuu wax walba gacanta ku hayo iyo inuu isagu yahay waa madax . Isagu waa xoog badan yahay, qaniinyo quruxsan adag wuuna qayliyaa badanaa wuuna jecel yahay inuu ordo.
Toby Shepweiler-ka 4 sano jir ah— 'Toby waa doggie caalami ah! Wuxuu hadda ku nool yahay Hong Kong, laakiin wuxuu ku faanaa Canadian. Isagu waa tusaalaha ugu fiican ee 'jilicsanaanta jilicsan' wuxuuna si dulqaad leh u fadhiisan doonaa iyadoo carruurta yar yar ee madaxiisa gaadha ay salaaxaan oo ay dhagaha ka jiitaan. Waxqabadyada uu jecel yahay Toby ayaa ah dabaasha, aadaya socod dheer iyo raacdeynta alaabada uu jecel yahay, dhagaxyada. Waa eeyga ugu caqliga badan oo leh ereyo badan oo uu fahmayo inuu madaxiisa dhinac u xiirto marka uu dhageysanayo waxaad dhahdaa socodka, xeebta, cashada, socodka, iyo wax kasta oo kale oo aad rabto inaad ku dhahdo, aad ayuu u feejigan yahay.
Toby wuxuu leeyahay dhogor dheer oo qurux badan oo dhegaha ka hooseysa waana la jeexjeexi doonaa markii uu qoyo, ama haddii ay tahay mid qoyan banaanka - sida dadka timaha oo kale! Wuxuu leeyahay jirka eey weyn, laakiin wuxuu umuuqdaa inuu aad uyaryahay markuu u boodo inuu dhabtaada saaro mar alla markuu doono. Wuxuu leeyahay caado aan caadi ahayn, markasta oo uu maqlo dhawaqa, wuxuu ku ordi doonaa balakoonka wuuna ooyi doonaa ilaa dhawaqa dhawaqa uu aad uga fog yahay maqalkiisa. Sidoo kale, haddii uu jiifsanayo oo uu ku arko adiga oo u soo dhowaanaya, isla markiiba dhabarka ayuu u rogaa isagoo si buuxda u xannibaya! Isagu waa nin jilicsan oo qoyskeenna oo dhan si buuxda u jecel jacaylkayaga weyn!
Rocco Shepweiler-ka oo ah eey yar markuu yahay 2 bilood jir - 'Rocco waa eey aad u fiican, caqli badan, firfircoon, mar walbana diyaar u ah inuu ciyaaro. Waxaa laga yaabaa inuusan nadiif ahayn, laakiin waa eeyga ugu fiican ee aan waligeen heli karno.
Kasey Mae Shepweiler (Rottie / Shepherd mix) oo ah eey 5 bilood jir ah oo daaradda ku jirta. - 'Kasey hooyadiis waxay ahayd AKC Rottweiler oo waxay ka soo jeedaa hiddo daahir ah oo reer Jarmal ah. Isku-darka ayaa ah ilaaliye / eey ilaaliya oo leh muuqaal wanaagsan, maskax iyo cibaado! Tarankaani shilka ahaa wuxuu ku sii kordhayaa caannimada. Waxaan u maleynayaa marka dadweynahu qabsadaan kala duwanaanta iyo shakhsiyadda isku dhafka waxaan hubaa inay noqon doonto nooc cusub oo socda. '
Kasey Mae Shepweiler-ka oo ah eey 6 toddobaad jir ah isagoo fadhiya gaariga agtiisa.
Layla Shepweiler-ka oo ah eey yar oo 3 bilood jir ah iyadoo xiran suun guduudan. — Aniga iyo saaxiibaday waxaan raadineynay eey weyn oo jecel. Waxaan ku dhameysanay inaan helno Layla, isku darka Rottweiler / Shepherd ee ka socda hoyga Los Angeles. Waxay ahayd saddex bilood markaynu helnay oo aan walaasheed la soconay. Waxaan dooneynay inaan labadaba qaadno laakiin waxaan horey uheysanay labo eey oo kale. Iyadu si dhakhso leh ayey u koraysa maalin kasta iyo maalin kasta. Layla waxay leedahay dhammaan tamarta adduunka waxayna jeceshahay inay la ciyaarto oo ay la fal gasho wax kasta iyo cid kasta oo ay la kulanto. Waxay jeceshahay inay seexato dhexdeenna laakiin way istaagi doontaa goor dhow markay noqoto eey weyn.
Meika the Rottweiler / German Shepherd mix at 2 years— 'Meika waxay leedahay shaqsiyad qabta qalbigaaga. Aad ayey u adeecsan tahay waxayna jeceshahay inay kubbadda ciyaarto. Waxyaabaha ugu qosolka badan ee aan ku arkay iyada oo sameyneysa ayaa ah hadii aad leedahay tuubada biyaha waxay isku dayi doontaa inay qabato biyaha maadaama ay hawada ku duuleyso. Waxay sidan samayn lahayd maalinta oo dhan haddii aad u oggolaato. Sawir gacmeedkani wuxuu ahaa uun ka dib markay waqti fiican ku soo qaadatay ciyaarta. '
Ylee Rottie / GSD sida eey oo ah qiyaastii 3 bilood jir daaqa cawska
Reese iskudhafka Rottweiler / Jarmalka Shepherd markay 2 sano jirsato fadhiga sariirta
Eeg tusaalooyin badan oo Shepweiler ah
Sawirada Shepweiler 1
buns iyo caddaan alaskan malaamute
maxay cunaan berriga Shiinaha
xadka collie shetland iskuxirka ido
boston terrier miniature mix mix